Voankazo any Sri Lanka. Famerenana feno ~ Journey-Assist - Review. Photo.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Voankazo any Sri Lanka. Famerenana feno
Vitao ny toromarika voankazo Sri Lanka. Sary, ny fomba hisafidianana, ny fomba fanadiovana, ny fomba fitahirizana, ny fananana mahasoa ary ny manimba
Nanoka tany Sri Lanka (Pineapple, Saparot)
Ny teny hoe Pineapple, dia avy amin'ny fiteny Tupi, ary nandika hoe "manitra mahafinaritra." Ary ny voan-jery dia tsy voankazo, fa raha ny tsirony masina sy ny lazany misy any Thailand, dia tsy azo atao tsinontsinoavina ao amin'ny famerenam-bokatsika izany! Mahagaga fa ny voan-tanimanga dia ahitra andavanandron'ny fianankaviana bromilium ... - ahitra amin'ny ankapobeny :). Ny anana Thai dia ny hanandrana, tena mialoha azy ireo izay misy voan-javamaniry izay mety hita any amin'ny fivarotana an-tsokosoko, farafaharatsiny satria any an-tanindrazana anana dia azonao atao ny manandrana mamy, masira ary .... masaka. 🙂 Pineapples any Thailand misy karazana maro no hita, nefa iray ihany no tena malaza, hiresaka momba izany isika.
Ny vidin'ny voan-jaza any Thailand
isany hatramin'ny 10 ka hatramin'ny 40 baht isan-taona (miankina amin'ny habe sy ny vanim-potoana). Ary mazava ho azy avy amin'ny toerana hividiananao azy. Any ho any amin'ny mpizahatany tanàna iray hadino, ny kesika dia amin'ny vidiny ambany indrindra (ho an'ny azy manokana).
Varotra voan-tany tany Thailandy
Desambra sy Janoary. Azonao atao ny mivory eny amin'ny talantalana mandritra ny taona, fa ny vidiny amin'ny vanim-potoana tsy mety. Amin'ny vanim-potoana, ankoatra ny tsena, ny kesika dia azo amidy tsotra izao amin'ny lamosin'ny fiara avy any Thais eo an-dàlana.
Ahoana ny fisafidianana anana masaka
Fofon'ny. Ny voankazo dia tokony hamoaka fofona malefaka sy malefaka. Raha mafy ny fofona dia efa nanamavo ny nanapa ary efa manomboka lo. Raha tsy misy fofona, dia maitso ny voankazo.
Tsara indrindra any. Ny ravin'ny kesika anana dia tokony ho voankazo (maitso) ary matevina, na dia misintona mora amin'ny voankazo aza izy. Midika izany fa tsy mila angovo fanampiny ny anana, izay midika fa efa masaka. Raha mavo ny ravina dia efa manomboka miharatsy ny voaniho. Ary koa, raha maka ny tampon'ny tananao ianao ary manandrana manodina azy, dia hikodia kely ny voankazo masaka.
Bosoa. Ny voankazo tokony ho malefaka, fa matevina. Raha tsy misy hollows sy patch matevina. Raha misy pentina maizina eo ambonin'io, dia miharatsy ny voan-kazy.
Pulp. Atsofohy eo amin'ny tamponao ny palanao. Raha malefaka ny feo dia masaka ny voan-kesika. Raha mitsoka ny feo dia midika izany fa tafahoatra izy io ary efa maina kely ao anatiny ao. Ny lokon'ny pulp dia tokony ho mavo-volamena. Ny loko paler dia manondro fa tsy mitombo ny voankazo.
Raha eny, fivarotana anana afa-tsy amin'ny hafanana amin'ny efitrano. Ny faharetan'ny fitahirizana dia miankina amin'ny fahamaizany. Matsiro, mihoatra ny andro maromaro tsy handainga. Hanomboka hiharatsy ao anatiny izy io ary "handehandeha kely" fotsiny.
Ahoana ny fanorana anana
Hetezo ny tampony sy ny faran'ny zaza
Napetrakay tamin'ny an-tendany ny voan-kesika ary nanapaka ny voan'ireo
Raha toa ianao misafotofoto amin'ny maso sisa tavela eny ambonin'ny habakabaka, dia holazainay aminao fa izy ireo dia milamina ao anaty spiral. Arak'izany, azonao atao ny manapaka ny boribory boribory, ary izany no mampahafinaritra kokoa ny vokatra farany 🙂
Avereno atao, ataovy tsara ny valin'ny asanao. Hetezo afovoany ho efatra efatra. ary nanapaka ny afovoany (fa raha anana masaka dia masaka ny afovoany ary tena faritra anana dia mahasoa.
Ny tanàn-tsaha dia nopotehina na kivy (raha amin'ny salady) dia vonona ny anana. 😉
Ny fananana anana kesika
Izy io dia misakana ny fananganana lalan-drà, izay tena ilaina amin'ny olona antitra
Fantatra amin'ny voankazo (voankazo) nomerao ho an'ny fihenan'ny lanjany. Ny singa "bromelain" ao anaty fototry ny anana dia manimba ny tavy.
Izy io dia misy fiantraikany tsara amin'ny motifan'ny tsina ary manalefaka ny fandevonan-kanina.
Izy io dia manampy amin'ny fandevonan-kanina, ka rehefa vita ny sakafo matavy fihinam-bidy, ny sakamalaho anana dia hanamora ny asan'ny kibonao.
Ny voan-kesika dia misy otrikaina be dia be.
Izy dia antioxidant matanjaka, ary manamafy ny hery fiarovana amin'ny tsimokaretina amin'ny fivaviana sy ny holatra.
Eny amin'ny ankapobeny, amin'ny voan-tanamanana dia misy singa madinidinika ilaina amin'ny olona iray mba hisorohana ny fahanterana, ary koa ny hamerenany sy hitehirizana ny elastika amin'ny hoditra.
Zava-mahasoa ho an'ny vehivavy io, satria miady mafy amin'ny cellulite sy ny fahaverezan'ny fahatanorana amin'ny herin'ny nono.
Ny asidra avo be dia misy fiantraikany amin'ny enamelika nify.
Ary koa, anana dia tsy azo ampiasaina raha misy olana amin'ny kibo (gastritis, mazoka, sns).
Ny anana dia vokatra iray izay contraindicated ho an'ny vehivavy bevohoka. Satria amin'ny endriny tsy dia be loatra dia fanafody fanalan-jaza. (tsy voaporofo, fa mendrika hanandrana izany, samy manapa-kevitra ho an'ny tenany ny tsirairay).
Avy any India kosa i Mango, izay iantsoana azy hoe "mpanjakan'ny voankazo." Ny finoana dia milaza fa ny manga dia loharano fahendrena sy fivelarana. Any Inde, mandraka androany, mandritra ny fananganana trano, ny voan'ny mango dia apetraka ao amin'ny fototra ka nanjaka tao anaty trano ny fampiononana sy ny firindrana.
Ao Thailand, ny malaza indrindra dia manga mavo sy maitso. Mihinana vaovao ihany izy ireo, ary ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo. Toa ny voanjo, apricot ary melon ny tsirony.
Manga mamy maitso
Ny vidin'ny mangoes
miovaova isaky ny vanim-potoana ary 30 ka hatramin'ny 70 baht isaky ny kilao. Eny, mazava ho azy, any amin'ny toerana lavitra ny toerana mpizahatany no ahitanao azy mora vidy kokoa.
Vanim-potoanan'ny Mango any Thailand
manomboka amin'ny tapaky ny volana martsa ary mifarana amin'ny tapaky ny volana jona. Fa afaka mihaona amin'ireo manga eo amin'ny talantalana mandritra ny taona ianao. fa vanim-potoana ary ho diso ny vidiny ary hafa ny tsirony.
Tsy voatahiry ela izy io. Mitahiry amin'ny mari-pana na ny hatsiaka, fa tsy ao anaty vata fampangatsiahana. Ary tsara kokoa ny mihinana avy hatrany.
Ahoana ny fomba fisafidianana manga masaka
Ny volony dia tokony ho tsy misy pentina, ny loko, toy ny ao amin'ny sary, fanamiana (mavo, toy ny akondro na maitso, toy ny sokay), amin'ny paty mena mena. Ny voankazo mihitsy dia malefaka malefaka, sahala amin'ny peach masaka.
Ahoana ny fanorana ny manga
Hetezo amin'ny ampahany telo amin'ny sisin-taolana, ka ny faritra afovoany dia misy taolana.
Tapaho ny nofo manodidina ny taolana (lemaka ary saika ny halavan'ny voankazo)
Raiso an-damosina ny halavan'ny tohin'ilay manga miaraka amin'ny pulp. Manamboatra paiso malemy amin-dry zareo amin'ny antsy kely izahay nefa tsy hikasika ny hoditra
Ahodino azy ireo ao anatiny, ary tapaho ireo cubes ho vilia iray.
Raha malemy be ny manga, dia tapaho fotsiny, mihinana ny pulp amin'ny sotro
Mampiasa fananana any Mango
Tsy salama i Mango! Izy io dia ahitana singa matevina azo ampolony maro. Tarika bitika B (B1, B2, B5, B6, B9), otrikaina A, C ary D.
Ny manga koa dia misy mineraly betsaka izay mampivoatra ny fiarovana sy ny fanatanjahana ny olona - zinc, manganese, vy ary phosphore
Mango dia antioxidant mahafinaritra
Ity voankazo ity dia mety ho antipyretika, ary miasa tsara toy ny prophylaxis amin'ny fivontosana malignant.
Mahasoa koa ny mamy amin'ny fahaketrahana maharitra. Izany dia manala tanteraka ny fihenjanana amin'ny fo ary manatsara ny toe-po.
Ny manga lava maitso dia misy fiantraikany tanteraka amin'ny fahatsaran'ny lalan-drà., Ary misy fiantraikany tsara amin'ny fahitana.
Mango dia vokatra alerenika, ka ny olom-pantatra voalohany dia tsy maintsy tanterahina tsara.
Aza mihinana voana mofomamy, satria misy fiantraikany ratsy amin'ny taovam-pandevonan-kanina
Ary aza manararaotra mamy masaka. Indrindra ho an'ireo manana olana amin'ny kibo sy pancreas.
Mangosteen in Sri lanka
Any Thailand, antsoina hoe "Queen of Fruits," izay mamono ny fofon'ny "King of Fruits." Durian :). Ny voankazo mihitsy dia toy ny atody fantsom-borona kely iray, saingy tsy mitovy amin'ny votoatiny sy ny tsiro. Ao anatiny dia misy voasarimakirana malefaka fotsy, ravina ivelany toa ny tongolo, ary amin'ny fahatsapana malefaka toy ny paiso. Na dia ao anatin'ny mangosteen aza, ireo tsipika ireo sy ny tsiro tropikaly matsiro izay mahafinaritra azy ireo ary tsy dia mifanalavitra loatra! Ny haben'ny voankazo masaka dia mitovy amin'ny paoma antonony.
Ny vidin'ny Mangosteen any Thailand
isaky ny vanim-potoana dia miankina amin'ny habeny ary eo anelanelan'ny 25 ka hatramin'ny 35 baht isaky ny kg. Amin'ny vanim-potoana tsy ampoizina, mahatratra 100 baht isaky ny kilao ny vidiny.
Vanim-potoana tao Mangosteen any Thailand
ny volana martsa ka hatramin'ny Novambra. Ny ambiny sisa dia tsy fahita firy eo amin'ny talantalana izany ary ny vidin'izy ireo dia miakatra amin'ny fotoana mitovy.
Matetika no misakafo maimay i Mangosteen, nefa mazoto amin'ny famiazana divay koa, amin'ny fikarakarana tsindrin-tsakafo, ary ny vehivavy tsara tarehy dia manao saron-tava mahasoa avy amin'izany.
Ny mangosteen dia voatahiry ao anaty vata fampangatsiahana. Saingy tsy miankina amin'ny fiainana mihoatra ny iray herinandro.
Ahoana ny fisafidianana an'i Mangosteen
Tsy mendrika hividy izany intsony
Tokony ho malefaka ny voankazo (ny paiso ny voankazo dia tokony ho mora masihina)
Ny loko dia tokony ho volomparasy maizim-bolo, volom-bary maina volo eny an-tany dia azo ekena. Ny lokon'ny ravina dia tokony ho maitso saturated. Ny ravina volontany dia manondro ny voankazo tafahoatra.
Raha voankazo mafy ilay voankazo dia mbola tsy maty.
Tsy mila manangona voankazo kely izahay. Na dia efa masaka aza dia hisy loko be ihany ao aminy, satria matevina ny voanjo ny manga.
Ahoana ny fanadiovana ny Mangosteen
ahintsana ny ravina avy eo an-tampony (raha masaka ny voankazo dia mora ampiasaina)
Isika dia manosika toerana eo ambanin'ny ravina taloha amin'ny rantsantanananao, raha toa kosa ny peel dia tokony manomboka miparitaka mora foana.
Mizara tapany ny voankazo.
Esory moramora ny zavatra ao anatiny (kobanina toy ny tongolo gasy), ary afaka mihinana avy hatrany ianao.
Tsikaritra ihany koa ny fomba nanakobanana ny voankazo kely fotsiny ny eo an-toerana (ka ny voanjo efa nanakorontana kely), ary avy eo dia naka ny mangosteen sy ny tanana roa, dia aforio amin'ny làlana samy hafa (ny tanana iray amin'ny lafiny iray, ny iray amin'ny mifanohitra), toy ny manilika ny voankazo. Rovitra ny Peel, na dia mijanona ho tsy mihetsika aza ny atiny. Fomba fomba mahomby (ny naoty mpanoratra).
Tsy afaka atao mahaliana ihany ianao, fa vao ny sivilizasiona.
Hetezo ny felam-pandrefesana eo amina ekoatera amin'ny foetus, ary tony am-pitonianao amin'ny tananao, toy ny sarony, manasaraka ny tapany ambony. Ny zavatra ao amin'ny mangosteen matotra dia misaraka amin'ny voanjo.
Mampiasa fananana any Mangosteen
Mangosteen dia ampiasaina mavitrika amin'ny dietseta mba hahavery lanja. Ny pulpa nataony dia manamboatra ny glycogen, izay maneho ny fahafaham-po amin'ny ati-doha.
Manafaingana ny metabolisma io ary mandrisika ny fandoroana ireo sela matavy.
Manankarena be amin'ny otrikaina, manamafy ny hery fiarovana izy io.
Misy vokatra mahasoa koa eo amin'ny hetsika ara-tsaina.
Manana toetra antimicrobial tsara izy ary ampiasaina amin'ny prophylaxis antitumor!
Mangosteen dia manana fiadiana antioxidant matanjaka.
Ary koa io voankazo io dia navitrika tamin'ny pharmacology.
Hatao avy any Mangosteen
Manatsara ny fihazakazaky ny rà izy ity, ka tsy maninona ny mampiasa mangosteen ho an'ny olona mitondra zava-mahadomelina hanondrotra rà.
Ny voan'ny mangosteen dia misy allergen. Noho izany, ny olom-pantatra voalohany miaraka aminy dia tsy maintsy tanterahana.
Durian any Sri Lanka
Durian, fantatra tao Thailandy ho "mpanjakan'ny voankazo", noho ny bitamina sy ny mineraly betsaka dia nahavitana azy! Nahazo ny lazany izy noho ny tsiro tsy mahazatra ary mihoatra ny fofona manokana, raha tsy maimbo (tsikitsoratry ny mpanoratra).
Ny zava-manitra avy amin'i Durian dia mampahatsiahy koa ny tongolobe maimbo na trondro maloto, miaraka amin'ny fofona maloto amin'ny fanodinana lakozia maloto. :). Amin'ny ankapobeny, ny voankazo dia tena mahaliana! Fa tsy ho an'ny rehetra.
Be ny voankazo Durian, mahatratra 10kg. Ny voankazo manitra dia rakotry ny volobe matevina miaraka amin'ny spike lehibe. Ao anatiny dia mizara ho fizarana maromaro, izay misy loko mavo manitra.
Ny tsiron'ny durian, samy manana ny fomba fanaony ny tsirairay. Fikambanana malaza, misy ovy miaraka amin'ny tongolo gasy sy laisoa.
Ny mpankafy an'io voankazo io dia tokony hihevitra fa any Thailand, ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny dia mitondra durian dia voarara! Io voa io koa voarara ho an'ny fitaterana amin'ny fiaramanidina!
Amin'ny toerana sasany any Thailand, misy famantarana manakana ny fandalovan'ny durian.
Ny sandan'ny durian any Thailandy
isaky ny vanim-potoana dia 80 ka hatramin'ny 100 baht isaky ny kg.
maharitra mandritra ny fahavaratra, manomboka amin'ny tapaky ny volana Mey ka hatramin'ny tapaky ny volana aogositra.
Ahoana ny fisafidianana durian
Tsy tokony hifantoka amin'ny loko ianao. Dia afaka maitso sy volontany, ary amin'ny fotoana io masaka ihany.
Ny voankazo dia tokony ho malefaka malefaka. Mandrosory kely rehefa tsindry. Raha malefaka loatra dia midika izany hoe overripe; raha mafy, izy io dia mbola tsy matotra.
Ny spike voajanahary matotra dia tokony resy hanandrana hanetsika azy ireo.
Tokony ho fofona ny foetus. Ny toerana manitra indrindra dia ny boriky. Saingy raha mahery ny fofona, dia tafahoatra ny "durian" ary mety ho "kely" ao anatiny.
Ny tongotry ny foetus dia tokony "mandeha", i.e. Aoka ho vonona hiala tampoka. Io dia maneho fahamaotinana.
Azo ovaina ny Durian. Amin'ny foetus efa masaka, ny sakamalaho anatiny dia 2-3 mm ao ambadiky ny rindrin'ny peel, ka raha mihovitra ianao dia hahatsapa ny fiovan'ny ao anatiny ao.
Azonao atao ny mamantatra sy mandondona. Ny feo tsy vita loi no mampaneno mafy, ary ny masaka dia lalina sy mangozohozo. Ilaina ny fiheverana fa ny overripe durian dia mieno tampoka ihany koa, fa rehefa mandre izany dia tsy hahatsapa ny fiverenan'ny votoaty, satria efa navoatra be loatra.
Ahoana ny fanadiovana durian
Sarotra be ny manapaka tanana durian. Tena mety indrindra ny maka antsy lava ary manambana amin'ny voanjo hizarazara ny voankazo amin'ny halves na quartement.
Olana ny tanana.
Mampiasa fananana an'i Durian
Ny Durian dia manavaka amin'ny fahafaham-po lehibe. Iray slice de durian dia afaka manolo tanteraka ny sakafo hariva matotra an'ny olon-dehibe.
Durian dia manankarena vitaminina. Ohatra, misy vitamina C betsaka ao aminy noho izay voankazo an-katerena.
Ny otrikaina A, B1, B2, B3, B5, B6, B9 dia misy ihany koa amin'ny resaka be dia be.
Amin'ireo singa bitika sy makro, dia misy potassium, calcium, Sodium, Magnesium, Phosphorus, Iron, Manganese, Copper, Zinc.
Ary ny durian ihany no voankazo azo hanina eto amin'izao tontolo izao misy solifara organikika.
Solika simika indole, tompon'andraikitra amin'ny fofona mofomamy amin'ny durian, tena bactericidal ary tena ilaina. Mandray anjara am-pahombiazana ny fizotran'ny fanavaozana rehetra amin'ny zavamananaina velona.
Hasiana avy any Durian
Hanitra voafaritra. Ny Durian dia tsy tokony hotehirizina miaraka amin'ny sakafo hafa. satria vetivety dia maimbo ny fofony izy ireo.
Noho ny habetsaky ny enzyme dia tsy tokony afangaro amin'ny alikaola ny durian. Izy io dia feno tazo sy adin-tsaina lehibe ao am-po.
Contraindicated amin'ny vehivavy mandritra ny fitondrana vohoka sy mandritra ny lactation.
Guava, Guayava ao Sri Lanka
Ny guava dia voankazo iray izay toa paoma maitso be. (na dia misy karazana kankana voaroy aza, fa tsy any Thailandy izany). Voankazo malaza indrindra any Thailandy izy io, na dia any Amerika Atsimo aza ny tanindrazany. Aleony mihinana azy tsy mifangaro sy miaraka amana volom-boasary, rehefa ny hena dia maditra sy manitra (mamy kokoa) ilay tsirony. Rehefa matotra ny guava dia mihamora kokoa ary misy tsiro tsy dia misy heviny loatra. Ny guava pulp dia fotsy na mavokely. Ao anatin'ny faritra iray, faritra midadasika dia feno taolana tsy azo ihodivirana (manomboka amin'ny zato ka hatramin'ny antsasa-arivo). Matetika ny guava no anaovana tsindrian-tsakafo.
Vidin'ny Guava any Thailand
kisary 25 ka hatramin'ny 50 baht isaky ny kg. Ny vidiny dia miankina amin'ny habeny sy ivelany endrika "cosmetic".
Vanim-potoana lava ny guava any Thailand
Ny guava dia tsy manana vanim-potoana voalaza, satria mamoa isaky ny 4 volana.
Ahoana ny fisafidianana lava lava lava
Tsotra ny zava-drehetra eto. Ny guava dia tokony hitovy loko amin'ny loko, tsy ho mafy (ohatra, toy ny voasarim-bolo matevina) ary tsy misy dents. Io dia momba ny guava kely mbola kely. Ao anatin'io fanjakana io no ampiasain'ny maro an'isa. Ny nofo dia mety miloko fotsy miaraka amin'ny maintso somary mailo. Na mavokely mavokely (amin'ny karazany misy felaka mavokely)
Raha mahaliana ny guava masaka dia mavokely mavokely na fotsy madio. (miankina amin'ny kilasy). Izy io dia ho malefaka sady ivelany ary hihontsona amin'ny ao anatiny.
Ahoana ny fanadiovana guava
Afaka mihinana manontolo ihany ianao, toy ny paoma. Saingy mila mitandrina ianao ary tsy manadino noho ny habetsan'ny voa manakaiky ny fotony.
Azonao atao ny manapotsitra amin'ny fahatapahana, manapaka ny fotony ary mihinana ny sisa miaraka amin'ny voanjo.
Matetika, manapotsitra amin'ny fety, afafazo ny guava miaraka amin'ny siramamy, sira na zava-manitra ary mihinana.
Mampiasa fananana ny Guava
Ny guava dia misy Vitamin C dimy ny haben'ny voasary iray!
Manana toetra tsara bakteria sy antimicrobial izy io.
Manana fiantraikany antispasmodika sy astringent koa izy io.
Ny guava dia mavitrika amin'ny pharmacology sy ny fitsaboana.
Ity voankazo ity dia misy fiantraikany tsara amin'ny fiasan'ny fo.
Ny guava no fomba tena matsiro amin'ny fanavaozana ny tosi-drà.
Misy vokany mahasoa eo amin'ny taovam-pandevonan-kanina koa izany.
Raha misy guava misy lavaka dia manampy amin'ny constipation io.
Noho ny antony maro, dia araraotina ny hampiasan'ny vehivavy azy mandritra mandritra lactation.
Hatao avy any Guava
Ny guava tsy latsaka dia contraindicated amin'ny olona mora amin'ny vato voa
Misy ny fiheverana fa tsy mendrika ny hihinana voankazo tsy voankazo, noho ny sela maratra manimba azy ireo. Saingy raha ny marina dia azo jerena fa aleon'ny Thais mandany ny guava vao tsy ampy. Toy izany koa ny mpizahatany.
Ny guava dia voankazo voan'ny alerenika, ka mila mahalala azy ianao tsikelikely, manombatombana ny fihetseham-pon'ny vatanao amin'io voany io.
Pomelo ao Sri Lanka
Voankazo bitika mahaliana. Malaza eran'izao tontolo izao. mampivoatra azy any Etazonia, India, Israel, sa saika ny firenena rehetra ao Azia Atsimoatsinanana sy any Shina. Fa araka ny fandinihana natao dia tena matsiro any Thailandy!
Pomelo amin'ny natiora dia voankazo be dia be (hatramin'ny 10 kg ny lanjany ary 29cm ny savaivony), fa ny voany kosa milanja 1-1.5 kg dia amidy sy fanjifana.
Ny lokon'ny pomelo dia afaka manomboka amin'ny maitso ka hatramin'ny mavo. Ny nofo dia mitovitovy amin'ny nofon'ny voan'ny sitraka rehetra, mavokely mavokely na maintso, na saika fotsy mangarahara (miankina amin'ny karazany) ary manandrana mamy-masira miaraka amina tsy fahita momba ny mangidy.
Ny vidin'ny Pomelo any Thailand
hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 30 baht.
Vanim-potoana Pomelo ao Thailand
ny volana aogositra ka hatramin'ny Novambra.
Ahoana ny fisafidianana ny pomelo
Any Thailand, matetika dia amidy pomelo efa nodiovina sahady. Ary izao dia efa milaza fa masaka ny voankazo ary vonona hihinana
Matetika koa any Thailandy, ny pomelo dia vita amin'ny kitapo misy zava-manitra (siramamy, sira, dipoavatra).
Fa raha maka ny voankazo iray manontolo ianao, dia tsotra ny soatoavina mifantina:
Ny voankazo dia tokony ho hentitra sy hentitra ... toa ny volom-boasary makirana na ny tahom-bokatra
Ny loko dia tokony ho fanamiana sy hazavana. Avy amin'ny maitso mavo hatramin'ny mavo.
Amin'ny felaka dia tsy tokony hisy faritra mifanohitra, fahasimbana sy fahasimbana hafa.
Ahoana ny fanadiovana ampongabendro
Ny fizahana azy toy ny voankazo bitika kely dia tsy mety miasa. Mila mampiasa antsy
Ny fomba voalohany dia ny manopy azy fotsiny toy ny paoma na ovy, nanapaka ny voasarona (matevina fa malefaka kosa ny voan'elan'ny pomelo. Avy eo afangaro amin'ny tananao ny atody. Toy ny voankazo kitrika rehetra, dia mora misaraka sy mifanalavitra.
Ny fomba faharoa. Hetezo ny paosy manodidina ny vakim-paritra isaky ny toerana efatra (fiampitana, raha mijery ilay voankazo avy any ambony) ianao.
Aorian'io, atondraho ny sela amin'ny "làlana miampita" ary esory amin'ny fomba tsy mihetsika izany
Ny ampahany anatiny dia zaraina fotsiny amin'ny alàlan'ny atody ary misy.
Mampiasa fananana an'i Pomelo
Ny voankazo dia manankarena be amin'ny asidra folaky. Midika izany fa tena ilaina ho an'ny vehivavy bevohoka io, satria asidra folaka dia misy mahasoa manoloana ny fampandrosoana ny foetus.
Pomelo dia misy vitamina A (fahitana) ary vitaminina C, ary koa B1, B2, B5.
Ambony amin'ny otrikaina ary kely ny siramamy, mahatonga an'i Pomelo ho voankazo natokana ho an'ny diabeta.
Ary ny foetus koa dia mampihena ny tosidra ary mihena ny torimaso.
Toy ny voankazo kitrus rehetra, misy fiantraikany mahasoa amin'ny toe-po.
Ho an'ny vady vehivavy, tena tsara ny pomelo….
Raha mamafa ny ranom-boasary ny hoditrao, manjary malefaka sy malefaka (ankoatry ny hoditra tsara tarehy sy marefo amin'ny vehivavy tsara tarehy)
Ilaina ihany koa izy io amin'ny fikarakarana ny fantsika sy ny fantson-tongotra miaraka amin'ny landihazo vita amin'ny landihazo voatoto amin'ny ranom-boankazo.
Ny voankazo dia mahasoa amin'ny fitsaboana sy fisorohana ny fihanaky ny rafitry ny urogenital an'ny lehilahy.
Haravina amin'ny pomelo
Ho an'ny vehivavy bevohoka, mahasoa ny pomelo, fa tsy tokony ho hararaotina. Ny fatra amin'ny iray mipetraka dia tsy tokony hihoatra ny 200 grama ary izany dia tsy afaka mihoatra ny indroa isan-kerinandro.
Ny voankazo ao an-trano saika dia allergenic, noho izany dia mila mahay tsara ianao.
Toy ny voankazo hafa sitraka, ny pomelo dia tsy soso-bidy amin'ny olona voan'ny kibo (gastritis, ulser)
Pomelo dia contraindicated ihany koa raha ny nephritis, hépatitis, colitis ary cholecystitis.
Papaya any Sri Lanka
Papaya, ity dia voankazo mahafinaritra toy ny zucchini amin'ny endrika endrika, izay misy nofo mitovy amin'ny loko ny karaoty ary amin'ny firindrana sy ny firafitra mba hamonoana :).
Mba hanandrana, ny papay dia mifandray amin'ny zucchini sy voatavo amin'ny fotoana mitovy, raha mamy ny tsiro.
Ny papay Thais dia hajaina sy tia mihinana tsy matsiro kely, manamboary salady som tam (ravina vita amin'ny papaya masaka, sombin-maina, tongolozy ary chili). Ny mpizahatany matetika dia aleony mampiasa vaovao.
Ny vidin'ny Papaya any Thailand
manao 40-50bat mandritra ny 1 kg.
Any Thailand, ny papaya dia amidy matetika efa nalaina tamin'ny 20 baht isaky ny fitaratra litatra.
Tany Papaya any Thailand
manodidina ny taona. Malalaka izy, ary amin'ny ankapobeny dia matetika izy no hita fa mihalehibe eny an-dàlana izay alehanao. Fa ny lehibe indrindra dia manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny jona.
Raha ny fomba dia, raha nividy tampoka papay tsy misy dikany, dia azonao atao ny mamelatra azy, ary afaka mamafy tsara.
Ahoana ny fisafidianana papaya
Raha maitso sy mafy (ny laisoa ny papaya), dia somary tsy matsiro ihany ilay izy, fa somary azo ihinana ihany. Karazana papaha ity no mandeha amin'ny salady.
Raha somary malemy ny papay dia efa masaka. Raha ny malemilemy tsy misy, ary na aiza na aiza somary malemy, dia efa somary overripe. Fa raha mijery tsara tarehy izy, dia mety io no mamy indrindra.
Ny lokon'ny hoditra dia mety ho maizina maitso, ary maitso, ary mavo ary na volom-boasary (indrindra ny karazany mamy). Tsy milaza na inona na inona izany ho an'ny ambaratonga voa. Ny tsara indrindra dia mamaritra ny fahamatorana amin'ny fanaka.
Ahoana ny fanodinana papaya
Tsotra ny zava-drehetra. Voalohany, ahosotra ny voanjo miaraka amin 'ny antsy. Ahoana ny fikomiana ovy :).
Avy eo, tapaho amin'ny antsasaky io.
Miaraka amin'ny sotro iray, afafinay tsara ny taolana izay hita eo afovoan'ny foetus (toy ny melon).
Manapaka izay sisa tavela izahay.
Papia dia vonona ny hihinana!
Tena tsara tokoa ny manao salady, ny tenda, makiazy ary zavatra hafa mahasalama amin'ny papaya.
Mampiasa fananana papaya
Ny papaya dia ambany kaloria, nefa feno otrikaina sy mineraly.
Amin'ny be dia be ny vitaminina C
Hita ao koa ny vitaminina A, B9, E, ary K.
Ity voankazo ity koa dia misy angovo tsy manam-paharoa izay mandevona proteinina: papain и chymopapain. Midika izany fa ny voan'ny papay dia tena mahasoa amin'ny kibo.
Ny Papaya dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny diabeta mellitus, ny fihanaky ny dengue ary ny periodontitis. Ampiasaina mavitrika amin'ny otrikaretina miaraka amin'ny Escherichia coli, parasites, ary koa ny tazo.
Papaya dia ampiasaina ao Ayurveda hanatsarana ny asan'ny spleen, sy ny fisorohana ny fanaintainan'ny ratra.
Misy fiantraikany mahasoa amin'ny taolana sy tonon-taolana ary misy aretina mifandray aminy.
Tsara ihany koa ho an`ny maso, ho an`ny rafitra cardiovascular, ho an`ny hoditra, ho an`ny voa sy voa.
Amin'ny ankapobeny ... Ny Papaya dia voankazo mahasalama izay mahasoa amin'ny vatana manontolo sy ny hery fiarovana. Raha azo atao dia tsy ho tafahoatra ny fampiasana azy io mba hisorohana ny aretina rehetra.
Voankazo ny voankazo, mila mifankahalala tsikelikely ianao.
Aza manararaotra papaya marobe.
Contraindicated rehefa bevohoka! Ny latex ao anaty famolavolana dia mety hiteraka tsy fahampiana.
Ny votoatin'ny fruktosa avo. Noho izany, mendrika indrindra ny manararaotra ireo marariny amin'ny diabeta.
Ranom-boankazo na Pittaya na Pitahaya
dia fahagagana niavaka tany Thailandy. Na izany aza, dia mitsoaka avy any Aostralia izy, ary miaina ankehitriny ary mivelona any Aostralia, Meksika, any amin'ireo firenena any Amerika Atsimo ary amin'izao fotoana izao dia saika ny firenena any Azia Atsimo Atsinanana.
Mirefy 50-70 baht isaky ny kg mandritra ny vanim-potoana tsy fahita firy ary 40 baht isaky ny vanim-potoana.
Vanim-potoan'ny Dragon any Thailand
Azonao atao ny milaza mandritra ny taona manontolo, fa ny be dia be amin'ny fahavaratra, manomboka amin'ny volana Jona ka hatramin'ny Aogositra.
eo amin'ny 30 baht isaky ny 1kg.
dia mifanandrify amin'ny vanim-potoana betsaka indrindra amin'ny voankazo ary maharitra hatramin'ny Mey ka hatramin'ny Aogositra.
Ahoana ny fanadiovana carambola. Starfrut
Kilonga ny zava-drehetra. Toy ny fitsipika, ny carambola dia voasasa tsara ary tapaka amin'ny kintana manify. Tsy misy matevina. Raha izany no izy, raha atao sakafo, na haingo ny voankazo.
Vitamin B1, dia misy fiantraikany mahasoa amin'ny fahaiza-miasa amin'ny rafi-pandevonan-kanina, ary koa manamafy ny rafi-pitatitra.
Sugar Apple (Soursop, Sausep, Annona, Noina, Guanabana)
Any Thailand, ny paoma siramamy dia antsoina hoe Noina, fa raha ny tena izy dia antsoina hoe Annona Scaly, ary ny voankazo "ho azy" dia Annona tsotra fotsiny.
Voankazo iray tsy mahazatra izy io, mampatsiahy ny paoma iray, fa hafa tanteraka amin'ny tsirony sy ny firafitra. Ny mampiavaka azy koa dia ny tombontsoany ara-pahasalamana lehibe sy ny tsirony mahaliana!
Vidin'ny Apple Sugar any Thailand. (guanabana, noina, annona)
amin'ny vanim-potoana dia mihena ny 40 ka hatramin'ny 50 baht isaky ny 1 kg. Amin'ny vanim-potoana tsy fahita firy, i Annona dia tsy fahita firy ary tsy afaka manantena hihaona aminy eo amin'ny talantalana ianao, fa raha hihaona aminy kosa ianao, amin'ny vidiny 70-80 baht isaky ny 1 kg.
maharitra hatramin'ny Novambra ka hatramin'ny Janoary.
Ahoana ny fanadiovana sy hihinanan'i Annona
Ny fomba voalohany dia azo antoka fa tsotra kokoa sy haingana kokoa, fa ny faharoa dia mamela fahatsapana mahafinaritra kokoa noho ilay dingana io.
Mampidi-doza avy amin'ny Sugar Apple (Anona, Noina)
Paoma mavokely na Chompu, Rose Apple, Rantsan-drano
Karazam-boankazo iray ... mitovy ivelany amin'ny endrika ny lakolosy na voahangy kely, ary misy ny olona milaza ny fofony amin'ny fofona maintso. Amin'ny alàlan'ny fijanonana ny sotro sy ny loba, ny voan'ny paoma mavokely dia mitovitovy amin'ny paoma mahazatra, fa manandrana mamoaka rano sy malefaka kokoa noho ny paoma iray.
Ao Thailand, ny voankazo ity dia hita amin'ny loko telo.
- mavokely mavokely sy mena ary mena. Mba hanandrana, tsy dia samy hafa firy.
Ny rano ny foetus dia feno rano, fotsy, voloina faeloma, tsy misy taolana. Ireo mponina eo an-toerana, mavitrika ary na dia mahafinaritra aza, dia mampiasa ireo voa ireo mba hamoahana ny hetahetany. Raha tsy izany, ny paoma mavokely dia tsy takiana manokana na an'ny Thailandey, na eo amin'ireo mpizahatany.
Ny vidin'ny paoma mavo (chompu) any Thailand
ambany sy antonony 20 baht isaky ny 1kg.
Vanim-potoana ho an'ny paoma mavokely any Thailand
manodidina ny taona. Farafaharatsiny eo amin'ny talantalana sy ny fivarotana dia hita mandritra ny taona izany ary mitovy hatrany ny vidiny.
Ahoana ny fisafidianana paoma mavokely
Ny voankazo dia tokony ho mafy orina toa ny paoma, tsy misy fahasimbana, dents ary, koa zava-dehibe ny hoe tsy miolakolaka.
Fomba ahazoana paoma mavokely mavokely
Toy ny paoma mahazatra. Tsy ilaina ny fandrefesana. Mora tokoa izy. Tsy misy voa koa mampidi-doza ao amin'ilay voankazo, hany ka afaka misakafo tsy misy ahiahy ianao.
Fa kosa azonao atao ny manapaka tsipika ary mihinana mampiasa fady.
Azonao atao ny manapaka poma mavokely ho varahina ary masaka ao anaty lapo miaraka misy siramamy.
Ampiasaina mavitrika ihany koa izy ireo ho fitaovana fototra amin'ny fanomanana jams, jellies, syrup, sauce mamy.
Toetra mahasoa amin'ny paoma maintso
Tsy misy zava-mahagaga, fa mbola:
Ny voankazo amankazo na ny ranom-boankazo ary zava-pisotro avy aminy dia ilaina amin'ny hatsiaka.
Eny, manamafy ny tosidra ihany koa izy ireo.
Ny fiantraikan'ny antimicrobialin'ny voankazo mavokely mavokely dia tena ilaina amin'ny toe-tany mafana misy koa izy ireo.
Voankazo misy sakafo misy kaloria ambany indrindra io, satria mety ho lanin'ny olona matavy be loatra, na ireo manaraka ny tarehiny.
Mankarary amin'ny paoma mavokely
Tsy misy contraindications manokana amin'i Chompa. Izy io dia azo ampiasaina tsy misy tahotra.
Saingy mazava ho azy fa tokony hatao amim-pitandremana ny fahafantarany azy, raha tsy fandeferana ny olona tsirairay. Ary toy ny mahazatra, amin'ny voankazo rehetra dia tsy tokony hohararaotina. Ny zavatra rehetra dia tsara amin'ny antonony.
Voalohany indrindra dia ny voankazo no voankazo betsaka indrindra eto an-tany amin'ny fambolena hazo! Mahatratra 30 kilao na mihoatra ny lanjany ary misy savaivony hatramin'ny 60 cm.
Any Azia, antsoina koa ny mofomamy, ho an'ny sandany sy ny fidirana aminy, satria miakatra hatraiza hatraiza any amin'ny firenena any Azia Atsimo Atsinanana izy io. Amin'izay fotoana izay ihany, ny zava-drehetra dia ampiasaina ao amin'ny jackrut, avy amin'ireo faritra azo hanina izay anisany ny valahany, mankany amin'ny aloky ny matevina izay mamahana ny akoho. Ary amin'ny fandrahoan-tsakafo, ity voankazo goavana ity dia manana ny fampiasana betsaka amin'ny salady, ary ny voamadinika, ary amin'ny tsindrin-tsakafo. Ary amin'ireo fivarotana any Thailand, dia afaka mahita kitapo am-bifasy na sakamalaho aza ianao. Ireo fananana ireo dia namela ny nangka ho lasa be mpitia be any Azia Atsimo Atsinanana.
is 25-40 baht. Na dia amin'ny faritra mandroso mpizahatany aza dia mety ho lafo kokoa.
manodidina ny taona.
Ny voankazo dia tokony ho fofona malemy nefa maharitra. (voankazo tsy voasary tsy misy fofona)
Ahoana ny fomba Peel nyoka
Midika koa izahay fa amin'ireto slise ireto dia misy taolana lehibe.
Amin'ny ankapobeny, raha tsy misy ny tsy fandeferana ny singa amin'ny singa ny nangka, dia azonao antoka fa mihinana azy io. Amin'izay indray, ny tena lehibe dia tsy ny manararaotra izany ary hamandoana azy, toy ny voankazo hafa.
Tamarind, mpianakavin'ny voanjo izay mahaliana any Afrika Atsinanana. Any Thailand, toy ny saika any amin'ny firenena any Azia Atsimoatsinanana dia nanam-paka tsara ary notiavian'ny mponina teo an-toerana noho ny voankazo mahaliana sy ny ilaina.
Ny ivelany, ny voankazo tamarisoa dia somary avo 3cm ny sakany ary 20 cm ny halavany.
Ny zavatra ao amin'ireto polona ireto dia tsy ampoizina toa ny daty amin'ny endrika sy ny tsiro.
. Tamarind dia malaza be antsoina hoe daty Indiana.
Ao anatin'ireny "daty" ireny dia misy taolana ratsy tsy misy poizina kely toy ny vakana.
Ny volonta dia misy loko volontsôkôlà malefaka sy haingon-trano marefo. Ary ilay hazo mihitsy, na dia an'ny fianakaviana legume aza, tsy mitovy amin'ny habe tsy mahazatra ho an'ny fianakaviana. Mety hahatratra folo metatra ny haavon'ny hazo ary mety hahatratra 10 metatra ny halavan'ny hazo ary misy habe kely toy ny ravina akasia toa azy.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny tsiranoka dia toa ny daty, saingy mitovy amin'ny voankazo maina toa ny apricot sy prunes maina, ary misy ifandraisany amin'ny ranom-paoma sy ny zava-mamy ao anaty lavenona.
Ny Tamarind, miaraka amin'ny tsirony toy izany, dia mendrika ny hahafantatra azy bebe kokoa.
Mahaliana fa mitombo ny tomarindy any Thailandy any amin'ny faritanin'i Petchabun ary be mpitia be izy ireo ka ny voany dia tandindona amin'ny sarin'ny sandrin'ity faritany mahafinaritra ity.
Ny vidin'ny Tamarind ao Thailand
ao amin'ny vanimpotoana dia manodidina ny 80-100 baht isaky ny 1kg. Amin'ny vanim-potoana tsy hita, dia matetika no hita ao amin'ny talantalana fitehirizana, fa tsy vaovao sy somary lafo kokoa.
Fotoam-pahavalozana any Thailand
Mitsingevana ny vanim-potoana. Any amin'ny faritra atsimo dia manomboka amin'ny fiandohan'ny ririnina ary mifarana amin'ny faran'ny febroary, ary raha mandroso mianavaratra ianao dia mihamandroso ihany ny vanim-potoana roa ka hatramin'ny telo volana, ary any amin'ny faritra avaratra dia afaka manomboka amin'ny faran'ny faran'ny volana febroary ary hatramin'ny farany ny volana aprily.
Store tomarind mety ho any amin'ny toerana mangatsiaka tsy misy mihoatra ny telo andro izy, ary ao anaty vata fampangatsiahana ao anatin'ny herinandro.
Ho bebe kokoa fitehirizana zava-manitra lava maharitra raha tsy misy very fananana ilaina dia tsy maintsy tantanana ny menaka na atao anaty saosy. Azonao atao ihany koa ny manandrana mando azy na mividy efa maina ao amin'ny briquettes (misy betsaka io amin'ny fivarotana). Mandritra izany fotoana izany, saika tsy very fananana ilaina izy, toy ny tsirony (satria voajanahary efa maina ny voankazo), fa azo tazonina ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny herintaona na roa mihitsy aza izy.
Ahoana ny fomba hisafidianana Tamara
Voalohany indrindra, ataovy azo antoka fa ny ivelany ivelany ny foetus dia tsy simba, very ahi-dratsy, scuffing na fiketronana.
Manoloana ny fikasihana azy dia tokony ho mafy ary tsy tokony hatoky ny fanerena antonony amin'ny rantsantanana ny onja.
Ny loko volon-koditra dia volontany marevaka, tsy misy faritra mifanohitra.
Ary ... ao amin'ny tomarind manitra manokana, raha manokatra ny ony ianao, dia aza gaga raha hahita kankana fotsy kely. Izy ireo no marika tsara indrindra fa manana tomarind tsara mahafatifaty ianao eny an-tananao!
Ahoana ny fomba fanoratana tsaramaso
Tsotra ny zava-drehetra!
Ny tena mampiavaka azy dia ny fanaovana incision miaraka amin'ny antsy eny amoron'ny ony.
Avy eo, amin'ny tananao mora ny manokatra ny podka.
Ny pulp dia manasaraka tsara ary efa vonona ho ampiasaina.
Raha madio ny tanana avy eo, ny pulp dia toy izany no mahazo aina ampiasaina amin'ny tanana. Mora, azo ampiharina sy matsiro!
Any Thailand, any amin'ny kianja be dia be dia afaka mahita zava-pisotro tomarind mahafinaritra amidy ianao. Manoro hevitra anao izahay hanandrana azy io, satria manana fananana manana lanja sy manangona be, izay tena mahavokatra any Thailandy mafana.
Ao amin'ny trano fisakafoanana, ianao dia mahita ny siramamy toy ny hanina amin'ny hena sy ny lovia mamy. Amin'ity anjara andraikitra ity dia tsara ihany koa izy!
Ampiasaina mahasoa amam-pitaovana
Ny fampiasana tantely tsy tapaka dia misy fiantraikany tsara amin'ny hery fiarovana.
Ity voankazo ity dia ilaina ho an'ny fisorohana sy ny fitsaboana amin'ny aretim-pankasitrahana sy bakteria.
Matetika ampiasaina ny lozika toy ny laxative.
Tsara izany toy ny anthelmintika, ary koa mavitrika miady amin'ny tapeworm sy boribory, izay mahatonga azy io ho vokatra ilaina any amin'ny faritra mafana any Azia.
Ny fampiasana tamarindy dia misy fiantraikany tsara amin'ny asan'ny digestive tract.
Izy dia tsara ihany koa amin'ny antipyretika.
Ny haben'ny vitamina A ao amin'ny sangan'asa azy dia mahatonga ny fampiasana tomarind mahasoa ho an'ny fahitana.
В fanafody nentim-paharazana Thailandtena ilaina ny fambolena tamarisoa. Miorina amin'ny voany, ny menaka ilaina amin'ny ultra-ilaina dia namboarina avy amin'ny mpanohitra anatiny sy ivelany an'ny fahasalaman'ny olombelona.
Ny menaka tamsa dia ampiasaina koa amin'ny vokatra kosmetika.
Ary avy eo am-bavony dia manamboara decoction matsiro sy teas, izay ankoatry ny tsiro dia manome tombony lehibe amin'ny ady amin'ny toe-javatra mamoa fady, ary koa manala ny tosi-drà ary manana fananana tsara indrindra!
Amin'ny sarika dia misy fitaovam-pitrandrahana lehibe ananan'ny olombelona. Mahasoa ara-bakiteny ho an'ny zavatra rehetra sy ho an'ny rehetra izany!
Ny Tomarind dia contraindicated ihany ho an'ny olona mijaly amin'ny aretin'ny vavony, ny tsina ary ny atiny.
Raha tsy izany, tsy mampidi-doza ny voankazo, fa toy ny voankazo hafa rehetra, ny fahafantarana izany dia tokony ho tanterahina tsikelikely. Tsy misy olona miaro amin'ny tsy fandeferan'ny tsirairay an'io na ny singa ao anaty tsaramaso.
Tsy azo atao ihany koa ny manararaotra sy mihinana an'io voankazo io. Amin'ny habetsahan'ny tafahoatra, dia mahavita mampahatezitra ny vavonin'ny mpizahatany tsy vonona amin'ny fitsapana.
Fankalazana (voankazo maniry), na araka ny antsoina koa hoe: Ny vokatry ny firehetam-po.
Ny anarana fanta-daza toy izany dia nomena azy fa tsy noho ny fahamendrehany manokana, fa noho ny zavamaniry manome ny voankazo fihinam-pitiavana dia an'ny fianakavian'i Passifloraceae. Raha ny fomba, ao amin'ny tontolo botanika, ny voankazo maniry dia fantatra hoe Passiflora dia voaloboka toy ny voaloboka, ary ekena ho iray amin'ireo tsara indrindra eto an-tany ny voninkazo an'io voaloboka io!
Ny voankazo, etsy andaniny, dia tsy dia manintona loatra amin'ny endrika ivelany, fa ny tsiron'ny voankazo dia mila marika tokoa!
Misy karazany roa voankazo mafana. Mavo mavo be (ny haben`ny makiazy), ary kely kokoa misy volomparasy-violet (haben'ny voasarimakirana iray). Ary ireo, izay kely kokoa, dia heverina ho poizina kely, nefa miaraka amin'izay koa, tsara kokoa noho ny mamy, ny fofona ary ny juicy, ary noho izany dia malaza eo amin'ireo mpizahatany.
Azonao atao ny mitahiry ny vokatry ny fitiavana amin'ny efitra mangatsiaka, toy ny ataon'ireo Thais, na ao anaty vata fampangatsiahana. Izany dia mety ho voatsifina, afangaro amin'ny siramamy sy mangatsiaka. Amin'ity tranga ity, ny fananana mahasoa (dia hiresaka momba azy ireo eto ambany isika) ny voankazo maniry dia mety hiaina hatramin'ny herintaona.
Ny vidin'ny fitiavam-pitiavana any Thailand
mihena ny vanim-potoana manodidina ny 45 baht. Amin'ny vanim-potoana fety, tsy fahita izany ary lafo kokoa.
Vanim-potoana ho an'ny voankazo maniry ao Thailand
maharitra hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny aprily
Ahoana ny fisafidianana voankazo maniry tsara
Voalohany, tadidio ny volony. Tsy tokony ho ketraka ary tsy hiorina izany. Aleony malefaka sy mahia (volom-bolo matevina matevina dia milaza fa efa niandry hatrizay ny voankazo). Misy karazan'ankazo tia fatratra izay ahitana ny fahatapahan-doko kely sy ny tenda kely ny volony dia manondro ny mason-koditra (amin'ny alàlan'ny fomba dia ekena ho masira kokoa ny voankazo toy izany). Saingy amin'ny fotoana iray hafa, ny voankazo tsara dia tsy tokony ho hentitra ary miaraka amin'ny ketrona ambara.
Amin'ny lanjany, tokony ho toa mavesatra amin'ny habeny ny voankazo. Raha maivana ny voankazo dia manondro tsy fahatanterahany izany.
Amin'ny fahatapahana, (raha ny voankazo dia volomparasy-violet) ny felany hita maso dia tokony ho maitso-mavo sy jelly-mitovy.
Ny pulp hita amin'ny voankazo voankazo mavo-volamena dia manana volontany-volontsôkôlà ary mitovitovy amin'ny mitovy lanja semi-likiravy mitovy aminy.
Fomba fanadiovana sy fihinanana voankazo-pitiavana
Voalohany, ho azo antoka fa manasa tsara ny voankazo amin'ny rano mangatsiaka.
Tapaho amin'ny tapany
Afoina miaraka amina sotro kely fotsiny ny aody
Ao amin'ny pulp dia misy be dia be ny voa malefaka kely. Izy ireo dia azo ihinana sy tena mahasoa, ary koa ny mandevon-kanina, mba hahafahanao mihinana azy ireo soa aman-tsara.
Ny tombony azo avy amin'ny voankazo maniry
Voninkazo voankazo (Passiflora)
Voankazo mahasalama ihany no voankazo iray, noho ny zava-mahadomelina sy fanafody bioactive no vokarina amin'ny fitsaboana sy fisorohana aretina isan-karazany.
Ary koa, noho ny fisian'ny asidra alfaola amin'ny firafitra, ny voankazo manintona dia misy tombony mahasoa amin'ny fitrandrahana ny hoditry ny olombelona, ​​mamerina ny elastika sy ny feo! Satria ny makiazy izay misy fihinam-boa dia maniry mafy tokoa amin'ny cosmetology!
Ny saron-tava mahasoa amin'ny volo dia vita amin'ny voankazo maniry ao an-trano, ary koa ny saron-tava ho an'ny hoditry ny tarehy, décolleté, tenda, tanana.
Ny voankazo manintona dia feno be dia be amin'ny vitamina A, B, C, E, H, K.
Ireo akora mineraly ilaina amin'ny fahasalamana ho an'ny olombelona dia misy koa ao aminy - potasioma, kalsioma, magnesium, vy, phosphore, sodium, solifara, manganese, klorida, iodine, fluorine, varahina ary seng. Ary mazava ho azy, satria samy amin'ny endriny voajanahary rehetra io, izy io dia voan'ny vatana tsara kokoa noho ny otrikaina misy takelaka.
Mahasoa ny fampiasana voankazo-pitiavana amin'ny aretina amin'ny fo sy ny atiny.
Ny foetus koa dia manana fiantraikany tsara amin'ny rafi-rafi-pitatitra, ary miaraka amin'ny fampiasa am-pahitazana dia manamafy orina ny hery fiarovana.
Ny ranom-boankazo manitra dia manampy amin'ny tsy fisian'ny insomnia, manome fiantraikany mampitony sy mampitony azy.
Ary, toy ny voankazo marobe tropikaly, ny voankazo mafana dia mandray anjara mavitrika amin'ny fisorohana ny homamiadana ary ny ady amin'ny fivontosan'ny tazo maloto.
Ary koa, ny fampiasana voankazo-pitiavana dia misy mahasoa antipyretika mahasoa.
Ny voankazo dia mandray anjara mavitrika amin'ny ady amin'ny aretina mikraoba amin'ny rafi-pitondrana.
Miatrika tsara amin'ny aretin'andoha (migraines) izy io, miaraka amin'ny fanajan'ny tosidrà.
Ny fananana manan-danja amin'ity voankazo ity rehefa ampiasaina matetika dia ny famoahana ny tsy fahanterana amin'ny natiora fotsiny, fa koa ny fiantraikan'ny faniriana voajanahary ao amin'ny rindrin'ny ati-doha, izay tena ilaina ho an'ireo izay mikasa ny hiaina lava sy feno!
Araka ny hita avy eo ambony dia mahasoa ny voankazo maniry, ary tsy vitan'ny hoe tena matsiro! Amin'ny fitsaboana ny olona, ​​ny faritra rehetra amin'ity zavamaniry ity dia ampiasaina. Bark, voa, ravina, voninkazo, ireo rehetra ireo amin'ny endriny iray na hafa dia vonona, ary ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina maro. Avy amin'ny fahaketrahana sy ny tebiteby, ho fampiroboroboana ny fitsaboana ny fivontosan'ny tazo!
Mankarary amin'ny voankazo maniry
Ny voankazo dia tsy misy contraindications.
Toy ny mahazatra, ataovy tsara ilay olom-pantatra voalohany ary tsy maika. Mba tsy hiatrehana ny tsy fandeferana amin'ny singa iray na singa hafa ao anaty voankazo maniry.
Raha novidiana tsy tany amin'ny firenena niaviany ny voankazo, dia sasao tsara aloha alohan'ny hampiasana azy, satria ny fitaterana ny voankazo dia voatsabo amin'ny savoka manokana avy amin'ny lozo sy ny fahalavoana mialoha.
Longan (Dragon Eye)
Longan (anarana Thai - lamyai) - ny voan'ny hazo sapinda (havana lichee и rambutan), taonjato mahery lasa izay, nitondra tany Thailandy avy any Chine.
Nahazo ny anaram-bosotra hoe "Dragon Eye" izy na noho ny tsirony tsy mahazatra, na satria rehefa manindrona lava ianao dia misy vato mainty eo afovoan'ny masony fotsy, ary ny voany dia tonga tampoka. 8)
Ny voankazo lava lava dia ravina kely (amin'ny loko, toy ny volon-kirihitra) baolina kely misy habe (1,5-2,5 cm). Ny longans dia miforona amin'ny sampahom-boaloboka, ary amidy amin'ny endriky ny voaloboka sy amin'ny endriny izany.
Fotsifotsy ny ravin-tanin'i Longan - fandikana, mitovitovy amin'ny tsanganana amin'ny voaloboka, fa manandrana zavatra hafa tanteraka. Ny sasany mampifandray ny tsirony amin'ny melon, fa ny sakafo kosa dia mahita fifandraisana misy eo amin'ny tsiro sy ny tsiro. lychee. Amin'izany toe-javatra izany, dia tsy dia ilaina loatra ny matoky ny hevitry ny antoko fahatelo, ary mendrika ihany koa ny manandrana io voankazo io. Aoka ho matsiro toa ny mahazatra, ny voankazo dia tena mahafinaritra.
Ny vidin'ny Longan any Thailand
amin'ny vanim-potoana dia mihena hatramin'ny 20 baht +
Vanim-potoana amin'ny Longan (Ranomasin'ny Dragon) any Thailandy
Vanim-potoanan'i Longan any Thailand, dia malefaka ny fotoana satria noho ny zava-misy vanim-potoana any Thailand miovaova isaky ny faritra ka faritra, longan iray any Thailandy hita eny amin'ny talantalana saika manakaiky ny taona. Nefa na izany aza, raha mihevitra ny atsimo malaza indrindra amin'ny atsimon'i Thailand isika amin'ny tontolo fizahan-tany, dia vanim-potoana lava izany nanomboka tamin'ny Jolay ka hatramin'ny Septambra.
Longan mandefitra tanteraka amin'ny hetaheta -3, raha toa ka alefa any amin'ny firenena samy hafa tsy mivoatra izy io.
Afa-tsy izany koa, ity voankazo ity dia mahavita velona ny fitaterana mahazatra ao anaty harona voankazo, ka ity voany ity dia azo atao fa mampifaly ireo olon-tianao izay nijanona tao an-trano.
Amin'ny efitra fisakafoanana longan dia tehirizina mandritra ny 3-4 andro. Azonao atao ny mitahiry ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 7-8 andro.
Na izany aza, raha mividy lava ela kely kely ianao, dia eo amin'ny mari-pana ao anatin'ny roa andro dia afaka mahazo ilay mamy tsy hita.
Ahoana ny fisafidianana Longan
Longan amidy amin'ny afera. Ary ny fomba tena marina hamaritana ny fahamasinan'ny foetus dia ny fanandramana voaroy iray amin'ireo voankazo mahasarika azy. Tsy manohitra azy mihitsy ny mpivarotra. Raha asiana ny tsirony ny nofo dia masaka kely ny voankazo.
Nefa azonao alaina izany, satria roa andro, raha mandry ao amin'ny hafanana izy ireo, dia hitsimoka ary mahazo ilay mamy irariana. Tokony ho alaina toy izany ireo olona ireo raha te hitondra azy ireo any ivelan'i Thailand ho fanomezana.
Ny voan'ny volon'ny mason'ny menarana dia tokony ho fanamiana, tsy misy fikapohana ary fahasimbana hafa.
Ahoana ny fanadiovana Longan
Tsy misy tsiambaratelo eto. Misokatra ara-bakiteny i Longan.
Aza hadino ny voankazo vokarinao amin'ny rantsan-tananao ary tsapao ny vovoka volony.
Mora mijanona ao ambadiky ny polety ny volony, ka azonao atao ny milaza fa efa nanadio ny ela ianao. Atsipazo ny antsasaky ny voanjo efa nopotehina, ary ampiasao ny paiso sisa, ho toy ny saosy dia sahy mihinana voankazo matsiro.
Aza adino fa amin'ny longan, afovoany dia misy taolana lehibe iray, izay tsy azo atao mihitsy. Maloto izy.
Amin'izany fomba izany, ny longan matetika dia mihinana vaovao, saingy afaka mampifaly ireo gourmets ho toy ny akora amin'ny salady, gilasy sy tsindrin-tsakafo samihafa. Io koa dia maina ary ampiana amin’ny zava-pisotro isan-karazany. Tena ilaina i Longshan, noho izany, ho tombontsoanao manokana, aza manala azy tsy hisaraka intsony izy.
Mampiasa fananana an'i Longan
Longan dia loharanom-boajanahary polysaccharides. Izay, manamafy ny tsy fahatomombanan'ny vatana, mihazona ny fahasalamana amin'ny ambaratonga sela.
В Fanafody Thai sy fanafody mahazatra Longan dia natokana hampiasana ho tonic, mandray anjara amin'ny ady amin'ny faharerahana, faharerahana ary ho famerenana amin'ny laoniny taorian'ny aretina.
Ny fampiasana longan, miaraka amin'ny fiantraikany tsara dia tsara, dia manampy amin'ny fanavaozana ny torimaso, mampitony ny rafi-pitatitra ary manatsara ny fifantohana.
Ny voankazo lemanga dia misy otrikaina C.
Longan dia mandray anjara mavitrika amin'ny ady amin'ny tsy fahampian'ny otrikaina ary ekena ho iray amin'ireo antioxidant mahery vaika indrindra.
Longan dia natolotra ihany koa ho antiparasitetika, anthelmintic. Amin'ny toe-javatra mitovy amin'izany ihany, dia ilaina ho fitsaboana sy fisorohana ny aretina amin'ny gastrointestinal tract.
Ambany kaloria ary avo be amin'ny mineraly sy otrikaina mahatonga ny mason'ny Dragon ho an'ny olona voan'ny diabeta.
Anisan'ireo voankazo marobe tropikaly hafa ny longan, ampiasaina amin'ny fikarakarana sy fisorohana ny homamiadana, sy ny olana amin'ny rafitry ny cardiovascular.
Handratra avy any Longan
Tsy mampidi-doza ny teny sinoa!
Ny mampiavaka azy dia raha ny tsy fandeferana ny tsirairay amin'ireo singa izay mamoa ity voankazo ity.
Marihina fa tsy maintsy mandeha miadana ny olom-pantatra voalohany, mihaino ny fahatsapana anatiny.
Raha miezaka manandrana ny tsy ao an-trano ianao, dia asaina mandatsaka rano mangotraka miohatra amin'ireo voankazo aloha. Koa satria fitaterana, ny foetus dia matetika no tsaboina amin'ny fomba toy izany, izay rano mangotraka ihany no mahatohitra azy.
Ny voankazo Langsat dia fitsaboana malaza any Azia Atsimo Atsinanana sy Thailand manokana. Amin'ireo mpizahatany dia mbola tsy dia malaza ilay langsat, fa amboarina tsikelikely izao. Rehefa dinihina tokoa, ny voankazo langsata dia manandrana tsara!
Misy ny fiheverana mahazatra momba izany longkong (Thai long-gong) izany ihany no anarana faharoa langsata. Raha ny marina, tsy izany no izy. Longkong dia Langsat ihany koa, karazany hafa, ivelany, saika mitovy, saingy miaraka amin'ny tsirony kely. Somary fofona kokoa izany, ary misy fahasiahana kely kokoa. Tsy dia matetika hita eo amin'ny talantalana ho an'ny mpizahatany. Ary ny voankazo an'i Longkong dia ampiasain'ny Thais, indrindra amin'ny fampidinana ny lovia hena.
amin'ny vanim-potoana dia mihena ny 40 ka hatramin'ny 60 baht isaky ny 1 kg. Amin'ny vanim-potoana tsy hita, mety ho hita ao amin'ny tsena Thai ihany koa izy io fa ho avo kokoa ny vidiny.
ny volana jona ka hatramin'ny oktobra. Any amin'ny faritra sasany any Thailand, ary koa arakaraka ny filàn'ny hazo langsata, ny voa dia azo zanana indroa isan-taona. Noho izany, ny voany dia mety ho hita mandritra ny taona.
Ahoana ny fisafidianana langsat (longkong)
Ahoana ny fanadiovana langsat (longkong)
Ny fananana langsata (longkong)
Handraisan'ny Langsat (Longkong)
Lamut (anarana malaza any Thailand), na sapodilla, na Woody ovy, na Achra, Zapote, Chiku, Voankazo malaza indrindra any Thailandy. Ary tsy zava-poana! Ny tsirony dia mitovy amin'ny tsiron'ny tantely, ny vatomamy sy ny fofomamy, ny aviavy, ny daty ....
Matetika ny sapodilla dia mihinana vaovao, fa izy io ihany koa dia malaza ho an'ny tsindrin-tsakafo marobe sy karazan-tsakafo isan-karazany. Matetika, sombin 'ny laminate, manaingo ny lovia fisakafoanana. Ny milkshake misy sapodilla dia tena tsangana fotsiny!
Mahaliana fa ny loko ny sapodilo dia avy amin'ny volontsôkôlà manjary ary ny volontsôkôlà mainty, ary inoana fa misy izany, satria ny voankazo laminate dia mbola tsy antitra, toy ny hoe tsy misy volavola ary, araka izany, mifikitra. Vokatr'izany, ireo sombin-tany, vovoka miraikitra amin'izy ireo, ary io tany faran'izay io no mahatonga ny sapodila amin'ny loko hitantsika azy.
Ny sapodilla antonony eo ho eo dia 4 ka hatramin'ny 8 cm ny savaivony, saingy misy spim-pony ny 10 cm na mihoatra. Miaraka amin'ny endrika ellipsoidal laconic dia mitovy amin'ny plum mahazatra.
Ao amin'ny pulp an'ny llamut dia misy voa vitsivitsy milelaka ao anatiny, toy ny kesika persimmon, izay, toy ny amin'ny persimmon voa, tsy mendrika izany.
Ny vidin'ny Sapodilla any Thailand
isaky ny vanim-potoana dia 35 ka hatramin'ny 50 baht isaky ny 1 kg. Amin'ny vanimpotoana, raha hihaona aminy eny amin'ny counter ianao dia 50-70 baht isaky ny 1 kg ny vidiny.
Taonan'i Sapodilla any Thailand
Mandritra ny taona ny vanim-potoana, fa indrindra amin'ny alàlan'ny fiatrehana izany, manomboka amin'ny volana septambra ka hatramin'ny desambra.
Raha nividy hira faran'izay mbola tsy masaka ianao dia, dia mahavita masaka izyraha avelanao mandritry ny andro vitsivitsy
Ahoana ny fitahirizana sapodilo
Mitahiry amin'ny mari-pana mandritra ny herinandro, ary ao anaty vata fampangatsiahana dia afaka mandry indroa mihoatra ny indroa.
Arovy ny tara-masoandro matotra amin'ny masoandro sy ny hafanana avo, satria misy siramamy be dia be, ary afaka "mamy" haingana izany.
Ahoana ny fisafidianana sapodila
Ny voankazo Lamut tsy matotra dia misy latina kely izay mahatonga ny voankazo mifikitra. Noho izany, ny toetra voalohany amin'ny sapodilla masaka dia tokony ho malefaka sy tsy mifamatotra tanteraka.
Ny famantarana faharoa fahamatorana - ny voan'ny llamut dia tokony ho malefaka malefaka. Raha sarotra ny voankazo dia mbola tsy vonona hasaina izy io ary ho tart ary tanteraka mamy.
Ny lokon'ny sapodilla masaka dia miankina amin'ny karazany, fa any Thailand kosa ny loko miloko volontany mainty, sahala amin'ny kiwi.
Ahoana ny fanadiovana sapodila
Esorinay ny sela manify iray misy antsy
Hetezo voankazo ho sombintsombiny
Isika manala ireo taolana
Mampiasa sy mahazo fahafinaretana aesthetic amin'ny llamut matsiro sy mahasalama isika
Aza manadio ny voankazo
Ento ny taolana
Izahay dia mampiasa ny sotro miaraka amin'ny sotro (matsiro).
Sapodilla dia antioxidant tena tsara, ary amin'ny ankapobeny dia voankazo manankarena amin'ny vitaminina sy ny mineraly izay mahasoa ny fahasalaman'ny olombelona.
Ny lafin'ny voankazo Lamut dia misy fruktosa sy sucrose betsaka, izay misy fiantraikany tsara amin'ny feontsika, ny hery sy ny herintsika.
Sapodilla dia tsara ho an'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretin'ny parasitita sy ny helminth, ary manana antiviral tsara sy anti-inflammatory.
Ity voankazo ity dia tena manankarena amin'ny vitamin C, ary rehefa avy mihinana voankazo roa ianao, dia mahazo dosis isan'andro isan'andro an'io vitamina io izay ilain'ny hery fanefitra sy lalan-dra.
Ny otrikaina B, indrindra ny asidra folika sy pantothenika, dia mahasoa an'io voankazo io io voankazo io.
Tena mahasoa an'i Lamut sy ny fahitana, ary koa ny rehetra tsy misy fanaintainan'ny hoditra moka, ary ho an'ny hoditra, satria manankarena amin'ny vitaminina A.
Sapodilla tsy vita dia manana astringent antidiarrheal tsara. Ary amin'ny ankapobeny, ity voankazo ity, rehefa lany amin'ny rafi-pitondrana dia misy fiantraikany mahasoa amin'ny kibo sy ny tsinainy.
Hatao amin'ny sapodilla
Sapodilla dia tsy misy contraindications manokana.
Saingy na izany aza, ny olom-pantatra voalohany dia tokony hotanterahina tsara amin'ity voankazo ity, satria ny tsy fandeferana ny singa tsirairay ao anatin'ny famoronana ny laminate dia tsy azo fehezina mihitsy.
Salak. Voankazo bibilava avy any Sri Lanka
Salak, matavory izy, voankazo bibilava ihany koa izy. Voankazo kely tsy fahita amam-boanjo iray mitovy amin'ny voanjo bibilava. (noho izany ilay anarana hoe menarana bibilava).
Maimbo ny voankazo toa an'i Corvalolum sy Valerian 🙂
Ny tsiron'ny bara dia sarotra mila mamaritra, ary misy hevitra samihafa be, izay ampitahaina amin'ny paoma, sy ny paoma, ary ny sakamalaho. Hita ao ny mamy sy ny masira, noho izany ny safidy tsara indrindra (toy ny zavatra rehetra) dia ny manandrana izany ary mamintina ny hevitrao manokana. :). Kely ny voankazo ary mitovy amin'ny kiwi. Ny hoditry ny volony dia manify, ary eo ambaniny misy fà efatra efatra misy taolana. Ny haavon'izy ireo dia miovaova ary sarotra koa ny mampiavaka azy. Mety ho masiaka sy crispy, ary mety matsiro toy ny paoma.
Ny zavatra hafa mampiavaka an'io voankazo io dia tsy misy voankazo any Thailandy. Sarotra ny misafotofoto amin'ny zavatra iray, satria ny fofona toa valerian na corvalol….
Ny vidin'ny voankazo bibilava any Thailand
isan-taona dia 40 ka hatramin'ny 60 baht isaky ny 1 kg.
Fotoam-piadiana any Thailand
ny volana May ka hatramin'ny Aogositra.
Mampalahelo fa tsy voatahiry mandritra ny fotoana ela ny fanarenana, ary rehefa afaka roa andro dia mety hanjavona na dia ao anaty vata fampangatsiahana aza.
Ahoana ny fisafidianana voankazo bibilava
Raha ivelany ivelany dia ny voankazo dia tokony ho feno, tsy ho ketraka, ary tsy misy ravina fotsy.
Arakaraka ny itomboan'ilay voankazo dia vao maika ny tsirony.
Ny lokon'ny volon-koditra matotra dia somary maivana kokoa noho ny tratra.
Maina ny voanjo ary vonona hanoritra sy hamontsina mora foana.
Ny voankazo dia tokony ho maivana, manomboka amin'ny beige ka hatramin'ny fotsy - semi-mangarahara
Ny fofona toetra an'ny corvalol dia tokony ho eo koa.
Fomba fikatsahana sy fihinanana voankazo bibilava. Salak
Ny salak dia manana voanjo somary vilana kely, ary raha malefaka ny tanana, dia azo atao tsara ny mandeha amin'ny afobe miaraka aminy. Amin'ireo toe-javatra ireo, raha manana voankazo bibilava maromaro ianao, dia ampy hanakanana ny fanolorana azy miaraka amin'ny kitapo sasany ary vetivety dia ho very ny tsilo.
Fa matetika dia efa amidy tsy misy tsilo ireo.
Ary ankoatr'izay, ny voaroy masaka dia mora diovina amin'ny tanana. Ny kapoka voan'ny peel, mivadika amin'ny ampahany lehibe ary mora tafasaraka amin'ny atiny anatiny.
Noho izany, ny tananao madio dia tanana madio, voankazo madio, ary azonao ampiasaina tsy misy rihitra.
Ny peel sy ny taolana dia tsy azo ihodivirana.
Ny Salak dia ampiasaina amin'ny endriny vaovao, fa ny handrahoana azy amin'ny rano mamy ihany koa, ary mihinana azy io toy ny kitapo.
Tokony ho tsaroana fa ny voankazo voanjo dia tokony hohanina avy hatrany. Nandritra ny fotoana ela, tsy handainga ny fanadiovana.
Mampiavaka ny voankazo bibilava (ny omby)
Salak dia manana vola lehibe lotso-, izay manampy tanteraka amin'ny fanesorana ny akora manimba amin'ny vatana.
Ary koa, ny herring dia manana fananana astringent tsara, izay midika izany fa tsara amin'ny famahana olana mifandraika amin'ny aretim-pivalanana.
Amin'io antony io ihany, ny herring dia tsara toy ny koagna mahery na ny rà.
Ny fampiasana mavitrika ny voan'ny menarana dia misy fiantraikany tsara amin'ny tsinainy.
Toy izany koa, ity voankazo ao amin'ny antonony ity dia mahasoa amin'ny gastritis sy fery.
Ao amin'ny sakafo ao an-toerana, ny decoctions avy amin'ny angadrano dia heverina ho ilaina amin'ny famahana ny olana amin'ny maso (fiasana tafahoatra, fanaintainan'ny ratra)
Mankarary amin'ny voankazo bibilava (ny omby)
Tsy mampidi-doza tanteraka ity voankazo ity fa toy ny voankazo hafa rehetra, dia tokony hahafantatra azy tsikelikely ianao.
Na izany aza, misy kely foana, fa ny mety ho tsy fandeferana manokana.
Coconut, Coconut - ity angamba no iray amin'ireo voankazo malaza sy mahasalama antsika amin'ny planeta!
Sarotra ny manafaka ny maha-zava-dehibe azy satria loharano vitamina sy mineraly ilaina amin'ny olombelona. Ampio izany ny habetsaky ny toetra ilaina hafa ao anaty rano voaniho, sôkômbra, ny voaniho, ary ny voanio, ary ity dia voankazo izay tsy azo hodinihina!
Ny voankazo Rambutan dia maniry amin'ny sampana 10-30. Matetika amin'ny fivondronana no amidin'izy ireo. Ny lokon'ny olon-dehibe dia mandalo ny fivoarana feno manomboka amin'ny maitso ka hatrany amin'ny mena mamirapiratra rehefa manomboka izy io! Eo ambanin'ity endrika feno herisetra ity dia menaka gelatinous mihantona amin'ny loko mena na fotsy volo. Izy no mpankafy, gourmets, tia rambutan. Ny tsiron'ny pulp dia mahafinaritra sy mamy, mitovy amin'ny tsiron'ny voaloboka. Ao anaty foza koa dia taolana tsy azo ihodivirana be.
isan-taona dia 25 ka hatramin'ny 45 baht isaky ny 1 kg.
ny volana May ka hatramin'ny Aogositra. Saingy afaka mifanena aminy amin'ny volana hafa ianao, amin'ny vidiny mora kokoa.
amin'ny mari-pana miakatra 8 ka hatramin'ny 12C, dia tsy hamoy ny tsirony mandritra ny roa na telo herinandro ny voankazo. Amin'ity tranga ity, ilaina ny hamandoana avo. Izany hoe ao anaty vata fampangatsiahana, tsy lavitra ny vata fampangatsiahana, dia hahafaly izy.
Ny hoditry ny rambutan dia tokony ho mena manjelatra. Bibikely volomboasary azo ekena. Raha misy ny maintso dia tsy mbola voa.
Ny volom-basy Rambutan dia tokony ho malefaka sy mivelatra amin'ny fikasika. Raha masiaka na maina izy ireo dia "maloto" ny voankazo ary tsy tokony hividy izany ianao.
Amin'ny ankapobeny, ny rambutan masaka vao mafana dia tokony hijery mahavariana sy amim-pifaliana :). - Mena matevina, mena volo malefaka malefaka miaraka amin'ny torohevitra maitso na mavo.
Ny Thai dia tsy fombafomba manokana momba ny fanadiovana rambutan. Notsorin'izy ireo tamin'ny felana ny volony, ary nesoriny, zarazara ho roa, toy ny volom-borona mandarin. Miaraka amin'io fomba io, ny tena zava-dehibe dia ny tsy manosika mafy ny voankazo raha tsy izany, atsipy ny ranom-boankazo matsiro.
Rambutan dia mavitrika koa amin'ny fanomanana ny famoronana isan-karazany, siramamy, saosy.
Rambutan dia tena manankarena amin'ny vitamin C. Ny voankazo iray dia misy ampahatelony ka hatramin'ny antsasaky ny fatra isan'andro ilaina amin'ny olon-dehibe. Ny otrikaina C no iray amin'ireo vitaminina katsentsitra indrindra an'ny tsimok'aretina maha-olombelona!
Tsy tokony hanararaotra rambutan koa ny olona salama. Tokony ho voafetra ho an'ny voankazo efatra na dimy isan'andro ny isan'izy ireo. Tena io indrindra ny habetsany tena ilaina mba hahazoana tombony ambony indrindra ary mety hanimba kely indrindra amin'ny rambutan.
Lychee dia manana nofo misy tsirony mamy, mandeha miaraka amin'ny tsiron'ny voaloboka fotsy, apricot, raspberry, izahay. Mamy ny tsirony fa tsy manopy, manana asidra mamelombelona.
ao amin'ny vanim-potoana 35-40bat mandritra ny 1 kg. Any amin'ny toerana tsy mpizaha tany izay maniry ny lychee dia mividy efa ho dimy kilao isaky ny vanim-potoana 20 baht.
dia manomboka ny volana jona ka hatramin'ny oktobra, fa noho ny fanarenana tsara ny lychee dia azo jerena eo amin'ny talantalana izany mandritra ny taona.
Ny voankazo dia tokony ho elastic, toy ny hoe hipoaka. Ny voankazo dia tsy tokony ho malefaka na malemy.
Fomba fanadiovana sy fihinanana lychee
Tsotra ihany eto
Otrikaina C ao amin'ny lychee in-droa avo roa heny noho ny bitika mitovy amin'ny voankazo sitraka (71 mg isaky ny 100 g, mifanohitra amin'ny 35 mg isaky ny 100 g). Lychee 100 grama dia afaka manarona ny filan'ny olona an'ity vitaminina ity isan'andro. Fa otrikaina C, raha voalohany, no tompon'andraikitra amin'ny hery fanefitra ataontsika sy ny fanoheran'ny vatana ny aretina isan-karazany.
Ny asidra folic ao anaty voankazo dia ilaina amin'ny famolavolana ny fitondrana vohoka sy ny ray aman-dreny sy ny fisian'ny olona salama tsara
. Ankoatra izany, ny lychee dia ilaina ihany koa ho an'ny lahatsoratra hafa ho an'ny vehivavy bevohoka, satria manampy amin'ny fitazonana ny tarehimarika io, hanatsara ny feony ary hanatsara ny toe-po! Ny tena lehibe eto dia tsy ny fanararaotana azy.
Ary farany ... Lychee, tena mahafinaritra!
Mandritra ny fitondrana vohoka, tsy tokony andiao an'io voankazo io ianao. Voankazo vitsivitsy isan'andro, ary tsara ny hahazoana izay rehetra ilainao amin'izy ireo.
Tokony ho tsaroana fa amin'ny ririnina any Sri Lanka dia vanim-potoana faran'izay betsaka ny voankazo. Ny akondro, papay sy anana dia tsy olana, fa ny mango, ny voankazo maniry, ny rambutan, ny voankazo ary ny voankazo matsiro hafa, raha hita, dia amin'ny vidiny tsy mampino.
Ary dia tonga amin'ny resaka tsy mampino ... satria tsy tian'ny olona ny hividy amin'ny vidiny avo folo heny avo kokoa, ary ratsy ny voankazo eo amin'ny talantalana.
Ny fotoana tsara indrindra amin'ny voankazo ao Sri Lnka dia manomboka amin'ny tapaky ny lohataona ka hatramin'ny faran'ny fahavaratra.